स्वास्थ्यका लागि कत्तिको हानिकारक छ अजिनोमोटो ? – Sky News Nepal
स्वास्थ्यका लागि कत्तिको हानिकारक छ अजिनोमोटो ?
२९ कार्तिक २०७८, सोमबार १६:०४ मा प्रकाशित
कात्तिक २९, काठमाडौं । खानपानको दुनियाँमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको एउटा खाना हो, अजिनोमोटो । रेस्टुरेन्टको खानामा होस् वा घरायसी परिकारमा समेत अजिनोमोटो अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ । खानामा स्वाद बढाउन प्रयोग गरिने अजिनोमोटो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ कि छैन ? यो बहस पोषणविद्हरुमा चल्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, अफ्रिकी मुलुक मोरिससले २ लाख ५० हजारभन्दा बढी वयस्क नागरिकमा साइलेन्ट किलरको रूपमा असर गरेको भन्दै अजिनोमोटोलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसरी विश्वका अरू पनि कतिपय मुलुकहरुले मानव शरीरमा असर गरेको भन्दै अजिनोमोटोमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, यसले मानिसको शरीरमा प्रतिकूल असर गर्छ भन्नेबारे कुनै पनि अध्ययनले पुष्टि भने गरेको छैन । (अनलाइन खबर)